11 è Fed: 518 tapitrisa euros avy amin’ny UE | NewsMada
Mitentina 518 tapitrisa euros ny vola avy amin’ny Vondrona Eoropeanina (UE), iadiana amin’ny fahantrana sy hanarenana ny toekarena eto Madagasikara. Avy amin’ny Tahirimbola eorpeanina ho an’ny fampandrosoana andiany 11 è Fed ity fanampiana ity, ao anatin’ny fandaharanasa Programme indicatif national (PIN), ho an’ny fe-potoana 2014-2020. Miandraikitra ny fandrindrana sady manara-maso ny fanatanterahana ny asa ny Birao manohana ny fiaraha-miasa any ivelany (BACE).
Nilaza ny talen’ny BACE, Rakotomahefa Bruno Maurille, fa mifandray amin’ireo minisitera mahazo ny famatsiam-bola izy ireo, mijery ny tetikasa ho tanterahina. Miantoka ny fanaraha-maso ny fanatanterahana sy ny firindran’ny tetikasa izahay, raha vao nivoaka ny famatsiam-bola.
Sehatra telo lehibe no voakasiky ny 11 è Fed ao anatin’ny PIN. Ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny asa ho an’ny vahoaka (145 tapitrisa euros), ny lafiny fotodrafitrasa ara-toekarena (230 apitrisa euros) ary ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra (130 tapitrisa euros). Manampy ireo ny fanohanana ny fierahamonim-pirenena (8 tapitrisa euros) sy ny fanamorana ny fiarahamiasa teknika (2 tapitrisa euros). Efa nivoaka ny 96%-n’ny vola. Hanampiana ny tetibolam-panjakana ny 21 tapitrisa euros ambiny.